Nidinika nikaton-trano tany Moramanga ireo komitin’ny manampahaizana mamolavola ny lalàna hifehy ny Filankevitry ny fampihavanana (FFM) vaovao. ”Tanjona ny hirosoana amin’ny fampihavanam-pirenena tena marina ka handraisana vahoaka sy ny mpanao politika rehetra anjara. Efa nisy ny drafitra nalefa any amin’ny filoham-pirenena. Avadika ho volavolan-dalàna izany ary handalo ny parlemanta roa tonta avy eo », hoy ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotomanana Honoré, tany an-toerana, omaly.
Nigadona ao Antsiranana, hatry ny omaly ny sambo mpiady afrikanina tatsimo. Nitsena izany ny ambasadaoron’io firenena io eto amintsika, niaraka amin’ny minisitry ny Fiarovana. Haharitra efatra andro izao fiantsonan’ity sambo mpiady, ahitana vata-miaramila 180 misy vehivavy 30 ity any an-toerana. Hanoka-baravarana ho an’ny rehetra izy ireo anio ary hanao asa sosialy sy hanao fifaninanana ara-panatanjahantena koa.
Hihaona amin’ny mpanao gazety ny eo anivon’ny Ceni, anio. Tombanana ho anisan’ny hambaran’izy ireo ny momba ny hiatrehana ny fifidianam-paritra hatao ny volana jona ho avy izao. Fa eo koa ny dian’ny filohan’ny Ceni, Rakotomanana Hery nanara-maso ny fifidianana tany Afrika farany teo.
Tafatsangana ny Fivondronan’ny tia tanindrazana sy ny naman’i Madagasikara ho amin’ny fanovana ifotony (MPMR). Nambaran’izy ireo teny Antaninarenina, omaly fa mitady ny vahaolana rehetra hahafahana mampandroso ny firenena, miparitaka hatramin’izay ity hetsika ity. ”Samy milaza ny heviny, mahita ny tsy mety, nefa tsy tafavondrona. Afaka mivondrona ao amin’ny alalan’ny antoko, na fikambanana, na amin’ny tenany manokana ny rehetra”, hoy ny mpitarika, Joseph Yoland.
Efa mametrapetraka ny drafitra handraisana ny fivorian’ny Frankofonia ireo tompon’andraikitra. Nambaran’ny filoha filankevitry ny fandraisana, Ratsiferana Hugues fa misy ny dingana efa vita. Eo koa anefa ireo an-dalana. Ohatra amin’izany ny eny Andohatapenaka. « Mila fahatsapan-tena sy fandraisana andraikitra ny handraisantsika ny OIF. Hampiroborobo ny toekarena sy ny kolontsaina ary ny zavaboahary izany.», hoy izy.